Universal USB Installer 195 1 exe(USB ကနေ Windows နဲ့ Linux တွေ တင်ကြရအောင်)
ဒီ Tool လေးကတော့ USB ကနေ Windows တင်ချင်သူများ၊ USB ကနေ Linux/Ubuntu တင်ချင်သူများအတွက် အများကြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော် သုံး ဖူးသမျှ USB Bootable လုပ်နိုင်တဲ့ Tool တွေ ထဲမှာ ဒီ Tool လေးကတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတာ တွေ့ရပါတယ်။
တင်ချင်တဲ့ Windows ဒါမှ မဟုတ် Linux အတွက် ISO ရှိထားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။
DVD တွေ CD တွေကို ISO လုပ်တဲ့ နည်းကတော့ သိပြီးသားလူလည်း များပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ထပ်ရေးပေးပါအုံးမယ်။ခုတော့ ဒီ Tool လေး အကြောင်းပဲရေးတော့မယ်။
ISO ရှိရုံနဲ့ အောက်ပါ Windows နဲ့ Linux တွေကို USB ကနေ Boot လုပ်နိုင်တဲ့ Stick လေးတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, December 29, 2013 No comments: Links to this post
C++ Complete(U Aung Myint) Volume 1+2+3 Ebook
C++ လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဆရာ ဦးအောင်မြင့်ရေးတဲ့ C++ Complete Volume 1+2+3 ပါခင်ဗျာ။
လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်များမှာ ဒေါင်းကြပါ။
Android တွေအတွက် Easy Wipe ROM ဆိုတဲ့ Tool လေးပါ
ဒီ Tool လေးကဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတော့ ပုံထဲကအတိုင်း....
စတာတွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း Android မှာ USB Debugging တော့ on ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Labels: Android, Android PC, android tutorial
Huawei Y300C Step2fail Error အတွက် dload လေးပါ
Huawei Y300C အတွက် firmware ပြန်တင်ချိန် Step2မှာ fail ဖြစ်တဲ့ Error ကိုရှင်းမယ့် dload file လေးပါ။
လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းပါ။
Labels: Android, android firmware, android tutorial
Huawei T8951 Step2fail Error အတွက် dload လေးပါ
Huawei T8951 အတွက် firmware ပြန်တင်ချိန် Step2မှာ fail ဖြစ်တဲ့ Error ကိုရှင်းမယ့် dload file လေးပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, December 29, 2013 1 comment: Links to this post
Viber PC Myanmar Font Installation
Viber PC အတွက် မြန်မာစာ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူများအောက်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရအောင် အောက်မှာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
စာအုပ်လေးနဲ့ font လေးပါ။ခင်ဗျာ။
အောက်ကလင့်တွေ မှာ ဒေါင်းပါခင်ဗျာ
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, December 28, 2013 No comments: Links to this post
Shuame Android PC Suite 2.0.0(13.12.2013 update)
ဒါက Shuame Android PC Suite ရဲ့13.12.2013 ထွက်တဲ့ နောက်ဆုံး version2.0.0 လေးပါ။
အသွင်သစ် အမြင်သစ်လေးနဲ့ ပါ။
အထဲက feature တွေကတော့ သိပ်ပြောင်းလဲမှုများများစားစားတော့မရှိပါဘူး။
Root Tool လေးကတော့ ပြောင်းသွားပါတယ်။
လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ download ယူကြပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, December 14, 2013 No comments: Links to this post
Labels: Android, Android PC
Windows732bit မှာ memory 4GB အပြည့်ရအောင်လုပ်မယ်။
ကျွန်တော်လည်း စာမရေးဖြစ်တာ ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ မိုဘိုင်းရော ကွန်ပျူတာရော ဘယ်ဘက်မှာမှ စာမရေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီပို့စ်လေးတော့ အသုံးဝင်မယ့်လူတွေ သုံးလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ Windows732 bit မှာ memory ကို 4GB ထည့်ထားပေးမယ့် တကယ်တမ်း usable အသုံးပြုနိုင်တာက 4GB မှာ မပြည့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Windows7 ကို 32 bit ပဲသုံးချင်သလို memory ကိုလည်း 4GB အပြည့်ရချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်.....
32bit RamPatch ကို အောက်မှာဒေါင်းပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Monday, December 09, 2013 No comments: Links to this post
UnlockRoot Pro 4.12 Full+ Serial Key
တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တော်တော်များများ အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ UnlockRoot လေးပါ။
Version 4.12 အတွက် key လေးနဲ့ တကွ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသုံးတည့်မယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ယူသွားလိုက်ပါ။
37.9 MB ရှိပါတယ်။ လိုင်းမကောင်းလို့ ဘာမှ မတင်နိုင်တာ ဒီနေ့တော့ မနည်းကြိုးစားပြီး တွန်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
serial key ကတော့ 100% အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
root ရ မရ ကတော့ စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, November 02, 2013 No comments: Links to this post
Huawei Y320-C00 Android_4.1,V100R001C92B611SP03 (B611) firmware
Huawei Y320-C00 Build Number 611 အတွက် firmware download link လေးပါ။
ကျွန်တော်လည်း လိုက်ရှာရင်း တွေ့လို့ ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်တာပါ။
Mobileအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနေကြတဲ့သူတွေအတွက် WinX Mobile Video Converter PC Full Version 3.1.1.152
ဒါကတော့ Mobile အမျိုးမျိုးအတွက် Video converter လေးပါ။ တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ။
တွေအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပြီးပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, October 05, 2013 No comments: Links to this post
MobileGo 4.1.0 Full Cracked
သူငယ်ချင်းတို့ရေ...အသစ်ထွက်တဲ့ MobileGo 4.1.0 လေးပါ။Full Cracked လေးပါ။
စေတနာပိုသွားလို့ crack တွေ patch တွေ ဖြည်စရာမလိုပဲ တခါတည်း သုံးလို့ရမယ့် exe လေးဖြစ်အောင် ကလိထားပါတယ်။ လိုင်းတွေက မကောင်းတာနဲ့ ဒီနေ့မှ ကြိုးစားပမ်းစား တင်လိုက်ရတယ်။
လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းပါခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, October 04, 2013 1 comment: Links to this post
Jelly Bean မှာ မြန်မာစာအမှန်မပေါ်သူများအတွက် Smart Zawgyi
အရင်ဆုံး MMUC က ကိုကျော်စွာသွင် ကို credit ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ jelly bean တွေမှာ မြန်မာစာသုံးရင် အမှန်မမြင်ရတဲ့ ပြသနာလေးတွေရှိပါတယ်။ ခုသွင်းမယ့် smart zawgyi မြန်မာဖောင့်ကတော့ အဲဒီ ပြသနာလေးတွေ ရှိတဲ့ jelly bean ဖုန်းတွေကို အဆင်ပြေစေမှာပါ။
G610S မှာလည်း မြန်မာစာ အမှန်မြင်ရပါတယ်။ အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်မဆိုပေမယ့် တော်တော်များများ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီးသားမို့မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, July 20, 2013 No comments: Links to this post
Android Gingerbread Skinpack - Windows 7.exe
Android ခရေဇီ သူငယ်ချင်းများအတွက် မိမိကွန်ပျူတာမှာလည်း Android Gingerbread ရဲ့အသွင်အပြင်လေးတွေလို မြင်နိုင်ဖို့ Android Gingerbread Skinpack လေးပါ။ Skinpack တွေသုံးလေ့သုံးထမရှိတဲ့ ကျွန်တော်တောင် ကြိုက်သွားတယ်ဗျ။ တခြား skinpack တွေလိုကြည့်ရတာ မရှုပ်ဘူးဗျ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, July 12, 2013 No comments: Links to this post
Labels: Android, android applications, Windows
Samsung Galaxy Trend 2-SCH I739 Root
SCH I739 ရဲ့ Root လေးပါ။ လိုအပ်သော သူငယ်ချင်းများယူသွားကြနော်။
Root အဆင်မပြေသေးဘူးကြားလို့ တရုတ်ဆိုဒ်တွေထဲ ကြိုးစားပြီး ရှာတာတွေ့လို့ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။Odin3 1.85 နဲ့ပဲလုပ်တာပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Tuesday, July 09, 2013 No comments: Links to this post
gtalk နဲ့ ဘာသာပြန်ကြည့်ကြမယ်။ (To English)
gtalk ကနေ ဘာသာပြန် မှုတွေ လုပ်ကြရအောင်.......တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ လင့်လေးပါ။
သင့်ရဲ့ gtalk မှာ zh2en@bot.talk.google.com ကို add ထားပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Tuesday, July 02, 2013 No comments: Links to this post
Root လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ စမ်းသပ်စရာ root toolလေး တစ်ခုပါ။ Chinese Version လေးဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Tuesday, July 02, 2013 1 comment: Links to this post
Galaxy Trend2I739 KEAMC4 Android 4.1.2 Jelly Bean Official Firmware
1. firmware ကို အရင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး extract ဖြည်လိုက်ပါ။a.tar.md5 အပါအ၀င် အခြားဖိုင်လေးတွေရပါမယ်။
Download I739 KEAMC4 4.1.2 official firmware
2. Odin3 3.07 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး extract လုပ်ထားပါအုံး။ Odin3 3.07.exe ရပါမယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, June 29, 20132comments: Links to this post
Labels: Android, android firmware
Sony Unlock Bootloader Tool Download
Sony Phone တွေ Bootloader Unlock လုပ်ပေးမယ့် Tool လေးပါ။ Support လုပ်တဲ့ model တွေကို အောက်မှာ ပြထားပေးပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Wednesday, June 26, 2013 No comments: Links to this post
Labels: Android, Bootloader Unlock Tool
Google App တွေသွင်းတဲ့ feature လေးပါလာတဲ့ Shuame Setup 1.2.1 Download
Shuame က ထွက်တဲ့ android multi tool ရဲ့ version 1.2.1 မှာ google app တွေသွင်းတဲ့ feature လေးတစ်ခု ထပ်မံပါဝင်လာပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download Shuame 1.2.1
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Tuesday, June 25, 2013 No comments: Links to this post
1. ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ jre(java runtime environment) ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပြီး ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ထားပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, June 23, 2013 1 comment: Links to this post
How to Install Cracked Apps Without Jailbreak on All iPhone,iPod,iPad
ဒါလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတို့လည်း တချို့ သိပြီးသားပါ။ kuaiyong ရဲ့ 2013 update လေးလည်း ဖြစ်တာမို့ ပြန်လည်မျှဝေဖြစ်ပါတယ်။ iOS 3,iOS4, iOS5, iOS6, iOS 6.0.1 တွေသုံးတဲ့ iPhone, iPad, iPod မှာ application နဲ့ game တွေကို jailbreak လုပ်စရာမလိုပဲ ထည့်သွင်းပေးတဲ့ kuaiyong.exe လေးဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, June 15, 2013 No comments: Links to this post
Android App နဲ့ Game တွေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်မယ့် Blackmart 0.99.2.42.apk
Play Store နဲ့ အလားတူ Android apk လေးတစ်ခုပါ။ Play Store မှာ ရှိတဲ့ app နဲ့ game တော်တော်များများ ဒီနေရာလေးက ရနိုင်ပေမယ့် သူရဲ့ အားသာချက်က Play Store မှာ ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ app တွေကို သူ့ဆီမှာ free ရနိုင်တာပါပဲ။
Download Blackmart 0.99.2.42.apk
ဖုန်းသမားများအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပါ..စာမေးပွဲဖြေနေ
တစ်ဆင့် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်မျာ...ဂုဏ်ထူးတွေ တစ်သီတစ်တန်းနဲ့ အောင်မြင်မှု
Credit To : mmitebook
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, June 14, 2013 No comments: Links to this post
WEP/WPA/WPA2 ရဲ့ Wifi Password ကို ဟက်ကြရအောင်.....
ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်တာ နည်းပညာတိုးတက်မှုကို လေ့လာနိုင်အောင် တစ်ခုတည်းအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အပျက်သဘောနဲ့ ရေးရခြင်းမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ စမ်းသပ်တဲ့သူတွေလည်း သူများအကျိုးမထိခိုက်အောင် မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ ဆင်ခြင်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်ဟက်ခြင်းနည်းပညာတွေကို နားမလည်သလို၊ မတတ်ကျွမ်းပါ။
ကဲ.... WEP/WPA/WPA2 ရဲ့Wifi Password လေးကို hack ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်စမ်းသပ်မိသလောက်တော့ ရတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။
-USB Stick တစ်ချောင်းရယ်၊
-Wireless Adapter ပါတဲ့ PC ဖြစ်ဖြစ် laptop ဖြစ်ဖြစ်တစ်လုံးရယ်၊
-Download ဆွဲရမယ့် file နှစ်ခုရယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, June 08, 20134comments:
Vroot 1.4.0 root tool latest update Download
Vroot နောက်ဆုံးထွက် version 1.4.0 လေးပါ။ လောလောဆယ် အစွမ်းအထက်ဆုံး root tool လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ လိုအပ်ကြမယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, June 08, 2013 1 comment:
Shuame Setup 1.2.0 (latest update)
သူငယ်ချင်းတို့ရေ.....Root Tool လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ shuame ရဲ့ latest update 1.2.0 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, June 07, 2013 No comments:
Huawei C8813 Network Unlock Code တောင်းလို့ ရတယ်တဲ့ခင်ဗျ။
C8813 တွေမှာ Network Unlock Code ဘယ်လို ဘယ်လို တောင်းရမလဲ??????
ဒီလို တောင်းရတယ်တဲ့ခင်ဗျ။ မေးလ်ပို့ရမယ့် ပုံစံပါ။ (မှတ်ချက်။ ။ အသုံးဝင်တာလေးမလို့ သူများ ဆီက ကူးချလာတာပါ။ မူရင်း ဘယ်သူလဲတော့ မသိဘူး။ Kyaw Loving ဆီက မ လာတယ်)
im one of the huawei user from myanmar
i bought huawei model- c8813d handset buy from shweli
but i can't use here myanmar sim card
so i needanetwork pin code (16)
so pls send this network code to my mail
.... here my handset information
ရေးသားသူ- Han Lay at Thursday, June 06, 20136comments:
Wondershare Data Recovery for Android 1.0.0.18 + Keygen
Android ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာ တခါတရံ မိမိတို့ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တခြား music,video တွေကို မှားယွင်းပြီး ဖျက်တက်မိပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးက သူငယ်ချင်းတို့ ဖျက်လိုက်မိတဲ့ ဓါတ်ပုံ, music, video တွေကို ပြန်ပြီး recovery လုပ်တဲ့အခါမှာ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါခင်ဗျာ။ keygen လေးပါ ပါတယ်။ တစ်ခုမှာချင်တာက register လုပ်တဲ့အချိန် online ချိတ်မထားမိပါစေနဲ့။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Thursday, June 06, 2013 No comments:
Labels: Android, Android Software
လှုပ်ရှားနေတဲ့ .gif ဖိုင်လေးလုပ်ရအောင်(Screen.Gif.1.0+Crack)
ကဲ....ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာက movie လေးတွေကို လှုပ်ရှားနေတဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေ gif လေးတွေအဖြစ် ပြောင်းကြမယ်ဗျာ....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းသပ်လို့တော့ ရတာပေါ့နော်......
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Wednesday, June 05, 2013 No comments:
Universal USB Installer 195 1 exe(USB ကနေ Window...
Windows732bit မှာ memory 4GB အပြည့်ရအောင်လုပ်မယ်...
Huawei Y320-C00 Android_4.1,V100R001C92B611SP03 (B...
Mobileအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနေကြတဲ့သူတွေအတွက် Win...
Jelly Bean မှာ မြန်မာစာအမှန်မပေါ်သူများအတွက် Smart ...
Galaxy Trend2I739 KEAMC4 Android 4.1.2 Jelly Bea...
Google App တွေသွင်းတဲ့ feature လေးပါလာတဲ့ Shuame S...
How to Install Cracked Apps Without Jailbreak on A...
Android App နဲ့ Game တွေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်မယ့် Bl...
WEP/WPA/WPA2 ရဲ့ Wifi Password ကို ဟက်ကြရအောင်.......
Huawei C8813 Network Unlock Code တောင်းလို့ ရတယ်တဲ...